मोटो सी: निर्दिष्टीकरण र मूल्य लीक | Androidsis
मोटो सी चश्मा प्रकट भयो
ईडर फेरेनो | | Motorola, मोबाईलहरू
मोटोरोला अर्को ब्रान्ड हो जुन राम्रो वर्ष हो। फर्मले बजारमा धेरै धेरै रोचक उपकरणहरू सुरू गरेको छ। साथै, तपाइँको शर्त शर्त एन्ड्रोइड फोनहरू शुद्ध त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंको पक्षमा काम गर्दछ, विशेष गरी जब यो अपडेटहरू आउँदछ। महिनौं पहिले, फर्मले आगमन आगमनको घोषणा गर्‍यो दायरा सी.
उनीहरूको दिनमा उनीहरूले भने कि यो एक हुनेछ कम मूल्य र राम्रो विनिर्देशनको साथ उत्पादन। केहि महिना पछि हामी यो दायरा को पहिलो फोन थाहा पाइसकेका छौं। त्यसको बारेमा मोटो सी। फोनका विवरणहरू हेर्दै हामी यो देख्न सक्छौं कि मोटरोला सही थियो।
यो एक छ सबै पूर्ण र सॉल्भेन्ट फोन। तर त्यो पनि यसबाट आश्चर्य हुनेछ कम मूल्य। एक आदर्श संयोजन र एक जुन धेरै ब्राण्डले प्राप्त गर्न चाहन्छ। मोटोरोलाले यस उपकरणको साथ प्राप्त गरेको केहि चीज। हामी यो मोटो सीबाट के आशा गर्न सक्छौं?
फोनसँग एक छ -इन्च स्क्रीन5854 x 480० पिक्सेलको रिजोलुसनको साथ। फोनको मुख्य भाग पॉली कार्बोनेटबाट बनेको छ र पछाडिको सूक्ष्म बनावटको साथ बनेको छ। भित्र, फोन एक हुनेछ MediaTek MT6737M 4-कोर प्रोसेसर। हुनुको अलावा माली- T720 GPU.
यस मोटो सीमाको र्यामले सबैभन्दा निराश पार्ने चीज हुन सक्छ। फोन भएको छ 1 GB को RAM। भण्डारणको मामलामा हामी दुई संस्करणहरू फेला पार्दछौं And२ र GB 8 जीबी। दुबै विस्तार गर्न को लागी माइक्रोएसडी मार्फत GB२ जीबी। फोटोग्राफिक सेक्सनमा यो त्यस्तो हुँदैन कि यो एकदम धेरै देखिन्छ। को रियर क्यामेरा बाट छ5सांसद जबकि फ्रन्ट क्यामेरा छ2सांसद.
La यस मोटो सीको ब्याट्री २,2.350० एमएएच छ, त्यसैले यसको विशिष्टताहरू हेरेर उपकरण स्वायत्तता दिन पर्याप्त हुनुपर्दछ। यो उपकरण मार्केटमा सुरु गरीनेछ चार रंग (सेतो, सुन, कालो र रातो) अन्त्यमा, यसमा एक अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा छ Android .7.0.०। नौगट.
चश्माको साथसाथै, फोनको मूल्य प्रकट भएको छ। यदि यस मोटो सी का स्पेसिफिकेसनले तपाईंलाई चकित बनायो भने, यसको मूल्य पनि हुनेछ। यो उपकरण बजारमा लगभगee यूरोको मूल्यको साथ हिट गर्दछ. यस मोटोरोला फोनको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Motorola » मोटो सी चश्मा प्रकट भयो
हेलोवीन ठूलो पदोन्नति, लाईटिन्थेबक्समा %०% छुट
गुगल पिक्सेल XL2भिडियो अडियो रेकर्ड गर्दा अडियो संग समस्या छ